०९:०८, ३१ मार्च २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन
१९:१५, ३० मार्च २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
०९:०८, ३१ मार्च २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
जर्मनीका जनतामा राष्ट्रिय भावना थियो। देश भित्र अनेक गुप्त समितिहरू बनेका थिए । यि समितिहरू नवीन विचारहरूको प्रचार्-प्रसार गरिरहेका थिए । यही कारण १८३० ई. र [[फ्रान्सको क्रान्ति (१८४८)|१८४८ ई. मा फ्रान्समा भएको क्रान्ति]]को प्रभाव यहाँ पनि पर्‍यो र यहाँका जनताले पनि विद्रोह गरे । यद्यपि यो क्रान्ति असफल भए तथापि यसबाट देशको जनतामा राजनीतिक चेतनाको आविर्भाव भयो ।
१८६० ई. मा जब [[इटालीको एकीकरण|इटलीको एकीकरण]] हुँदै गयो तब जर्मन जनतामा पनि आशाको सञ्चार भयो र उनीहरू पनि एकीकरणको दिशामा गतिशील भए । इटलीको एकीकरण कार्य पिडमण्टको राजाको नेतृत्वमा भईरहेको थियो । यसै गरी जर्मन देशभक्तहरूले प्रशाको नेतृत्वमा जर्मनीको एकीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने निश्चय गरे । ययस समय प्रशा का शासक विलियम प्रथम तथा चान्सलर [[ओट्टो बिस्मार्क|बिस्मार्क]] थिए । तर यी जर्मन देशभक्तहरूको अगाडि दुई प्रमुख चुनौती थिए -
* आस्ट्रियाको प्रभुत्वबाट छुटकारा पाउनु,
सर्वप्रथम बिस्मार्क लेबिस्मार्कले आफ्नो शक्ति कोशक्तिको प्रहार डेनमार्क को राज्य माथी गरे। जर्मनी र डेनमार्क को बीच दुई प्रदेश विद्यमान थिए, जसको नाम श्लेसविग र हलस्टीन थियो। दुई दुबै प्रदेश शताब्दी औं देखी डेनमार्क को अधिकारमा थियो, तर यसको भाग थिएन। हॉलस्टीनहलस्टीन का जनता जर्मन जाति को थिए, जबकि श्लेसविग मा आधा जर्मन र आधा डेन थिए।
१९औं शताब्दी मा अन्य देशहरु को सरह डेनमार्क माडेनमार्कमा पनि राष्ट्रियता कोराष्ट्रियताको लहर फैलियो, जसबाट प्रभावित भएर डेन देशभक्तहरु लेदेशभक्तहरुले देश को एकीकरण कोएकीकरणको प्रयत्न गरे। उनीहरु चाहान्थे की उक्त दुबै राज्यहरुलाई डेनमार्क मा शामिल गरेर उसको शक्ति लाई सुदृढ़ गरियोस। फलस्वरूप १८६३ ई. मा डेनमार्क को शासक [[क्रिश्चियन दशम्]] ले उक्त प्रदेशं लाई आफ्नो राज्य मा शामिल गर्ने घोषणा गरे । उनीहरुको यो कार्य १८५२ ई. मा सम्पन्न लण्डन समझौताको विरूद्ध थियो, यसकारण जर्मन राज्यहरुले यसको विरोध गरे। उनीहरुले यो मांग गरे की यी प्रदेशलाई डेनमार्क के अधिकार बाट मुक्त गरियोस। प्रशाले पनि डेनमार्क कोडेनमार्कको यस नीति को विरोध गरे। बिस्मार्क लेबिस्मार्कले सोचे कि डेनमार्कको विरुद्ध युद्ध गर्नको लागी यो अनुकूल अवसर हो। उनी यो प्रदेश माथी प्रशा को अधिकार स्थापित गर्नको लागी इच्छुक थिए । यो कार्य लाई उनी एकलै नगरेर आस्ट्रिया को सहयोग बाट पूरा गर्न चाहन्थे, ताकि प्रशा को खिलाफ कुनै विपरीत प्रतिक्रिया न होस। आस्ट्रिया ले पनि यस कार्यमा प्रशा लाई सहयोग गर्नु उचित सम्झियो। यसको कारण यो थियो कि यदि प्रशा यस मामिलामा एक्लै हस्तक्षेप गर्दथ्यो भने जर्मनी मा अस्ट्रिया को प्रभाव कम हुन जान्थ्यो। यसको अतिरिक १८५२ ई. को लण्डन समझौतालाई पूर्ण रूपबाट पालन गर्न चाहन्थ्यो। यस प्रकार प्रशा र अस्ट्रिया दुईले सम्मिलित रूपबाट डेनमार्कको विरुद्ध सैनिक कार्यवाही गर्ने निश्चय गरे। फलस्वरूप १८६४ ई. मा उनीहरुले डेनमार्क माथी आक्रमण गरी दिए। डेनमार्क पराजित भयो र उसले आक्रमणकारीहरुको साथ एक समझौता गरे। यसको अनुसार उसले श्लेसविग र हलस्टीलको साथ-साथ लायनबुर्ग को अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनु पर्‍यो।
===गेस्टीन को समझौता ===
यस समझौता को अनुसार श्लेसविग र हॉलस्टीन को प्रदेश त डेनमार्क बाट ले लिईयो, तर यस लूट को सामान को बाडफाड को सम्बन्ध मा प्रशा र ऑस्ट्रिया मा मतभेद भयो। यस प्रश्न लाई लिएर दुबै को बीच को कटुता उत्पन्न भयो। ऑस्ट्रिया आफ्नो आन्तरिक स्थिति को कारण युद्ध गर्ने पक्ष मा थिएन जबकि प्रशा यस प्रसंग को माध्यम बाट ऑस्ट्रिया को जर्मन राज्य संघ मा कमजोर गर्न चाहन्थ्यो। अन्तत दुबै को बीच १४ अगस्त १८६५ ई. मा गेस्टीन नामक स्थान मा समझौता मा, जो ‘गेस्टीन-समझौता’ के नाम बाट जानिछ। यो समझौता यस प्रकार थियो-
*1. श्लेसविंग प्रशिया लाई दिइयो,
*2. हॉलस्टीन माथी आस्ट्रिया को अधिकार मानियो,
*3. लायनवर्ग को प्रदेश प्रशा लेप्रशाले खरीद गर्‍यो, जसको मूल्य ऑस्ट्रियाअस्ट्रिया लाई दिईयो ।
यो समझौता बिस्मार्क को कूटनीतिक विजय थियो । उनी यसलाई एक अस्थायी समझौता मान्दथे, जसको अवहेलना कहिलेजहिले जोबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो। अतः अगाडि बढेर यसको खिलाफ प्रतिक्रिया हुनु स्वाभाविक थियो।
वास्तववास्तवमा मा बिस्मार्क कोबिस्मार्कको इच्छा ऑस्ट्रियाअस्ट्रिया लाई युद्ध मायुद्धमा परास्त गरेर उसलाई जर्मन संघ बाट बहिष्कृत गर्नु थियो। यस दिशा मा उनले तैयारी गर्न आरम्भ गरेका तर यो कार्य सरल थिएन, किनकी ऑस्ट्रिया यूरोप को एक महत्वपूर्ण राज्य थियो र त्यस माथी आक्रमण गर्नाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मा असर पर्न सक्दथ्यो । अतः ऑस्ट्रिया को विरुद्ध सैनिक कार्यवाही गर्नु पूर्व बिस्मार्क अन्य राज्यहरु को इच्छा जान्न चाहन्थे । यस प्रकार युद्ध को पूर्व उनले कूटनीतिक चाल द्वारा अन्य राज्यहरु को संभावित प्रतिक्रिया लाई सम्झानु आवश्यक सम्झिए। ग्रेट ब्रिटेन ले यस युद्ध मा हस्तक्षेप गर्ने संभावना थिएन, किनकी वह एकाकीपन की नीति मा चलिरहेको थियो। रूस बिस्मार्क को मित्र थियो। उनले फ्रान्स लाई लालच देकर युद्ध मा तटस्थ रहने आश्वासन प्राप्त गरे । नेपोलियन तृतीय ले तटस्थ रहनु राष्ट्रीय हित मा उचित सम्झिए । उसले यो सोचे कि ऑस्ट्रिया र प्रशा को युद्ध बाट उनीहरुको शक्ति क्षीण हुने छ र त्यस स्थिति बाट फ्रान्स लाई विकास गर्ने अवसर प्राप्त हुने छ। १८६६ ई. मा प्रशा र इटली को बीच सन्धि भयो, जसको अनुसार इटली ले युद्ध मा प्रशा लाई साथ दिने आश्वासन दियो। यसको बदलामा बिस्मार्क ले युद्ध मा सफल भए पश्चात इटली लाई वेनेशिया दिने वचन दिए । यस सन्धि को सूचना पाएर ऑस्ट्रिया धेरै चिंतित भयो। अब ऑस्ट्रिया र प्रशा को सैनिक तैयारिया तीव्र गति बाट चल्न थाल्यो। यस प्रकार प्रशा र ऑस्ट्रिया को बीच युद्ध को स्थिति निर्मित भयो । अब युद्ध को लागी केवल अवसर खोज्ने आवश्यकता थियो। श्लेसविग र हॉलस्टीन सम्बन्धी समझौता मा युद्ध को कारणहरु खोजी निकाल्न कुनै कठिन कार्य थिएन। १८६६ ई. मा प्रशा लाई यो अवसर प्राप्त भयो र उसले ऑस्ट्रिया को खिलाफ युद्ध घोषित गरिदियो। इटली प्रशा लाई साथ दिई रहेको थियो। यो युद्ध सेडोवा को मैदान मा दुबै को बीच सात हप्तासम्म चल्यो, जसमा ऑस्ट्रिया पराजित भयो । यस युद्ध को समाप्ति [[प्राग को सन्धि]] द्वारा भयो, जसको शर्तहरु यस प्रकार थिए-
*1. ऑस्ट्रिया को नेतृत्व मा जुन जर्मन-संघ बनेको थियो, त्यसलाई समाप्त गरियो।
यस युद्ध को फलस्वरूप जर्मन-राज्यहरु बाट ऑस्ट्रिया को वर्चस्व समाप्त भयो । अब त्यहाँ प्रशा को प्रभाव कायम भयो। यस युद्ध को पछी प्रशा लाई अनेक नवीन प्रदेश प्राप्त भयो, जसको कारण अब त्यो यूरोप को शक्तिशाली राज्य मानिन थाल्यो । अब बिस्मार्क पनि यूरोप मा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। प्रशा को यस सफलता ले परोक्ष रूप बाट फ्रान्स को भावी पराजय को संकेत दियो । यस प्रकार यस युद्ध बाट प्रशा लाई अनेक लाभ भयो।
हैनोवर, हेसकेसल, नासो र फ्रेंकफर्ट प्रशा के राज्य मा शामिल गरियो। यस पछी उसले जर्मन-राज्यहरु लाई नया सिराबाट आफ्नो नेतृत्व मा संगठित गर्ने प्रयास गरे। किन्तु दक्षिण-राज्यहरु को विरोध को कारण यस्तो गर्नु सम्भव भएन। ऐसी स्थिति मा यो उचित समझा गया कि चार दक्षिण जर्मन राज्यहरु को छोड़कर (बवेरिया, बुटर्मवर्ग, बादेन र हेंस) शेष जर्मन-राज्यहरु को संगठन प्रशा को नेतृत्व मा बना बनाईनु पर्छ । बिस्मार्क लेबिस्मार्कले यसै गरे। यस प्रकार उसने उत्तरी जर्मन राज्यहरु को गठन गरे। यसमा २१ जर्मन राज्य शामिल थिए। यस नयाँ संघ को अध्यक्ष प्रशा लाई बनाईयो । बिस्मार्क यस संघ को प्रथम चाँसलर नियुक्त भए । उनी त्यहा गठित होने वाला संघीय परिषद को अध्यक्ष पनि नियुक्त गरियो। यस परिषद मा कुल ४३ सदस्य थिए, जसमा १७ सदस्य प्रशा का थिए। संघ को अध्यक्ष को रूप मा प्रशा के राजा लाई अनेक महत्वपूर्ण कार्यों जस्तो युद्ध एवं सन्धिलाई संपादित गर्ने अधिकार थियो। दूसरी सभा को नाम लोकसभा थियो, जसको सदस्य वयस्क मताधिकार के अनुसार जनता द्वारा चुनिन्थे।
यस प्रकार बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की दिशा मा अगाडि बढे । अब उनको लागी केवल अन्तिम कार्य गर्न नै बाकी थियो।
जर्मनी को एकीकरण को लागी बिस्मार्क ले फ्रान्स संग अन्तिम युद्ध गरे, किनकी उसलाई पराजित नगरिकन दक्षिण को चार जर्मन राज्यहरु को जर्मन संघ मा शामिल गर्न सम्भव थियो। उता फ्रान्स ऑस्ट्रिया को विरूद्ध प्रशा की विजय बाट आफुलाई अपमानित महसूस गरिरहेको थियो। उसको विचार थियो कि दुबै को बीच चलने वाला युद्ध दीर्घकालीन हुनेछ तर आशा को विपरीत यो युद्ध चाडै नै समाप्त भयो, जसमा प्रशा लाई सफलता मिल्यो।
फ्रान्स को राष्ट्रपति [[नेपोलियन तृतीय]] ले आफ्नो गिर्दै गरेको प्रतिष्ठा लाईप्रतिष्ठालाई पुनः जीवित गर्नको लागी फ्रान्स को सीमा को [[राइन- नदी]] सम्म विस्तृत गर्ने विचार गरे, तर उ यस कार्य मा सफल हुन सकेन। बिस्मार्क आफ्नो कूटनीतिक चालहरु द्वारा फ्रान्स को हरेक इच्छा लाई असफल गर्दै रह्यो। नेपालियन ले [[हॉलैण्डहलैण्ड]] बाट [[लक्जेमबर्ग]] लिन चाहे, तर बिस्मार्क को विरोध के कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । यसमा दुबै को बीच कटुता को भावना निर्मित भयो। फ्रान्स विश्वास गर्दथ्यो कि प्रशा को उत्कर्ष को कारण उसको स्थिति नाजुक भएको छ । उता प्रशा पनि फ्रान्स लाई आफ्नो मार्ग को बाधक मान्दथ्यो । फलस्वरूप दुबै देशं का अखबार एक अर्काको विरुद्ध विष उगाल्न लागे । यस्तो स्थिति मास्थितिमा दुबै को बीच युद्ध आवश्यक प्रतीत हुन थाल्यो ।
===स्पेन कोस्पेनको राजगद्दी को विषय===
यस बीच स्पेनमा उत्तराधिकारको प्रश्न उपस्थित हुन गयो, जसबाट वहां [[गृहयुद्ध]] प्रारम्भ हुन गयो । १८६३ ई. मा स्पेन को जनता ले विद्रोह गरेर रानी ईसाबेला द्वितीय लाई देश बाट निकाली दिए र उनको स्थान पर प्रशा को सम्राट को नातेदार लियोपोर्ल्ड लाई त्यहाँको नया शासक बनाउने विचार गरे। नेपोलियन यसको तैयार थिएनन, किनकी यस्तो हुँदा स्पेन माथी पनि प्रशा को प्रभाव स्थापित हुन जाग्छ। फ्रान्स को विरोध लाई विचार गर्दै लियोपोल्ड ले आफ्नो उम्मीदवारी लाई परित्याग गरि दिए । तर लाई यसबाट सन्तुष्टी भएन । उसले यो आश्वासन चाह्यो कि भविष्य मा पनि प्रशा को कुनै राजकुमार स्पेन को शासक हुने छैन । यो नेपोलियन की मनमानी र प्रशा को अपमान थियो। अतः यस घटना को कारण १५ जुलाई १८७० ई. मा फ्रान्सले प्रशाको विरूद्ध युद्ध को घोषणा गरिदियो।
यो युद्ध [[सीडान]] के मैदान मा लडियो, जसमा [[नेपोलियन तृतीय]] पराजित गरिदियो। जर्मन सेनाहरु फ्रान्स को भित्र सम्म घुस घुसे। २० जनवरी १८७१ ई. मा पेरिस को पतन को पश्चात युद्ध समाप्त भयो । अन्तत दुबै को बीच एक सन्धि भयो, जो इतिहास मा ‘फेंकफर्ट को सन्धि’ को नाम बाट विख्यात भयो। यसको शर्तहरु यस प्रकार थिए -
*. फ्रान्स कोफ्रान्सको अल्सास र लॉरेन कोलरेन प्रदेश प्रशा लाईप्रशालाई सुम्पिनु पर्ने।
* . फ्रान्सफ्रान्सले ले युद्ध कोयुद्धको क्षतिपुर्ती २० करोड़ पाउण्ड दिनु पर्ने।
*. क्षतिपुर्ती कोक्षतिपुर्तीको भुक्तानी सम्म जर्मन सेना फ्रान्स मा बसिरहनेफ्रान्समा छ।बसिरहने।
यो सन्धि फ्रान्स को लागी अत्यन्त नै अपमानजनक सिद्ध भयो र यसको परिणाम दूरगामी सिद्ध भयो। यस सन्धि ले दुबै को बीच दुश्मनी को जड़ मजबूत गरिदियो।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/777524" बाट अनुप्रेषित